सरकारसँग नेता पौडेलको आग्रह, 'आमसहमतिमा नागरिकका समस्या समाधान गरौं'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
सरकारसँग नेता पौडेलको आग्रह, 'आमसहमतिमा नागरिकका समस्या समाधान गरौं'
काठमाडौँ — कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आमसहमति जुटाएर नागरिकका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले विश्‍वव्यापी महामारीको रुप लिइरहेको बेला बिहीबार एक सन्देश जारी गर्दै नेता पौडेलले सरकारका निर्णय कार्यान्वयनका लागि पनि आमसहमति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
नेता पौडेलले मुलुकमा आइपरेको समस्यासँग जुध्‍न सहमतिको सरकार बनाउने संसारमा प्रचलन रहेको समेत सुझाएका छन् ।
'सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो बेलामा आमसहमति जुटाएर नागरिकका समस्या समाधान गरिनुपर्छ । यस्तो बेलामा आम सहमति आवश्यक हुन्छ । जसका कारणले सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या नहोस्', नेता पौडेलले सन्देशमा भनेका छन्, 'यस्तो बेलामा आवश्यक पर्‍यो भने सहमतिको सरकार पनि बनाउन सक्नुपर्छ । दुनियाँमा यस्तो प्रचलन पनि छ ।'
मुलुक जोगाउनका लागि लकडाउनको समयमा घर घरमा बसेर चिन्तन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले विपन्‍न नेपालीका लागि तत्काल राहतको घोषणा गर्न सरकासँग माग गरे ।
नेता पौडेलको सन्देश
संकटको अवस्थामा अहिले नै वर्तमान र भविश्यका चिन्तन थालौ !
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइसरको संक्रमण रोक्नका लागि सरकार लडाउन आह्वान गरेको छ । यो एकसाताका लागि लकडाउनका लागि गरेको घोषणा नेपालको स्वास्थ्यका लागि, संक्रमणबाट जोगिनका लागि अपनाएको हो लकडाउन । यसले आर्थिक सामाजिक तथा राजनीति क्षेत्रमा प्रधाव पार्ने छ । सवैभन्दा बढि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यसको प्रभाव देखिनेछ । स्वास्थ्यको क्षेत्रका चुनौती पनि आइलागेको छ । खास गरि चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षाको विषय नागरिकको सुरक्षासंगै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । स्वास्थ्यकर्मीले उपचारमा संलग्न हुँदा सुरक्षा कवज लगाउनुपर्ने छ ।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक पीपीईको कमी देखिएको छ । हाम्रो देशमा संक्रमण देखिसकेको छ । यस्तो अवस्था सवैभन्दा पहिले स्वास्थ्य क्षेत्र सुरक्षित हुन आवश्यक छ । अस्पताल चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी पहिले सुरक्षित हुन आवश्यक छ । आइसोलेसन वार्ड, आइसियु बढि भन्दा बढि आवश्यक छ । यसका लागि अहिले पीपीईको कमी भएको सुनिदै छ । सरकारले चीन लगायतका देशबाट पीपीई ल्याउन लागेको पनि जानकारी आएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षाको व्यावस्थामा सरकार सवैभन्दा पहिले ध्यान दिन जरुरी छ ।
आज लकडाउनको अवस्थामा मुलुक छ । अहिले कोरोनाको आंतक छ । यो आंतक मेची महाकालीको सिमामा मात्र सोचेर हुनेवाला छैन् । यो समस्या विश्वको समस्या भएको छ । नेपाली भएर मात्र सोच्ने हो भने पनि नेपाली विश्वमा छरिएर बसेका छन् । हामीले ती सवै नेपालीको सुरक्षाका बारेमा सोच्नुपरेको छ । विदेशमा रहेका ४० ५० लाख जनताको अवस्थाका बारेमा खोजी गर्नुपर्छ । आधुनिक राज्य भनेको मुलुकसंग जोडिएका सवैलाई हेर्ने हो । कल्याणकारी राज्य भनेको नै यही हो । विदेशमा रहेर रेमिट्यान्स मार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने नागरिकका बारेमा पनि लोककल्याणकारी राज्यले तत्काल सोच्नपर्छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा अझ ठूलो समस्या आउदै छ । हाम्रो भोलीको आर्थिक अवस्था के हुने हो । अब हाम्रा विकासका योजनाहरु के हुने हुन् । अहिले सरकारले लकडाउनको अवस्था के हुने हो । एकसाताको लकडाउनले संक्रमण नियन्त्रण हुन सक्छ कि सक्दैन् । भारतले २१ दिनको लकडाउनको घोषणा गरेको छ हामीले त्यो अवस्था हेर्नुपर्छ कि पर्दैन । यो पनि सरकारले विश्लेषण गर्नुपर्छ । मुलुकको भावि अर्थतन्त्रका लागि मित्र मुलुकहरुसंगको सम्बन्ध कस्तो रहने मित्र मुलुकहरुमा पनि संकट छ । ती मुलुकहरुले हामीलाई कस्तो सहयोग गर्न सक्छन भन्ने पनि सोच्न जरुरी छ । अहिलेको संक्रमणले मानव सभ्यता माथि नै प्रहार गरेको छ । यो महामारीले दुनियालाई कस्तो क्षति पुर्याउने हो । अबको मान सभ्याता पनि कस्तो हुने हो ।
त्यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । यो महामारीका कारण बर्तमान कस्तो हुने हो भविश्य कस्तो हुने हो वुद्धिजीवीहरुले पनि अहिले विश्लेषण गर्न जरुरी छ । आजको आवश्यकता भनेको बर्तमान जोगाउदै भविश्यको निक्र्यौल गर्ने हो । अहिले सरकारले जिम्मेवारी बोध गरोस । राजनीतिक दलहरु सामाजिक संस्था बुद्धिजीवी तथा दाताहरुले कस्तो सहयोग गर्ने हो । सवैले सहयोग गर्नुपर्छ । लकडाउन छ । तर मुलुक जोगाउनका लागि घर घरमा बसेर चिन्तन गर्न आवश्यक छ । सरकारले विपन्न नेपालीका लागि तत्काल राहतको घोषणा गरोस । जय नेपाल
प्रकाशित : चैत्र १३, २०७६ २०:१९
लकडाउनले डायलासिस र किमो लिनुपर्ने बिरामी मर्कामा
चैत्र १३, २०७६ बुनु थारु
काठमाडौँ — ५८ वर्षिय श्याम लामा (नाम परिवर्तन) मिर्गौलापीडित हुन् । पेप्सिकोला बस्ने उनलाई हप्तामा ३ पटक नियमित डायलासिस गराउनुपर्ने हुन्छ । उनी डायलासिसका लागि निदान अस्पतालमा रहेको आरोग्य फाउन्डेशनको मिर्गौला डायलासिस सेन्टर जाने गर्छन् । तर लकडाउनले उनलाई समस्या थपिदिएको छ ।
डायलासिस गराइरहेका मिर्गौला रोगीहरू । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर
जन्मजात नै किड्नी समस्या रहेका उनले यसअघि मेडिसिटीमा डायलासिस गराउँदै आएका थिए । मंसिरबाट उनी त्यहाँ जान थालेका हुन् । लकडाउनले गर्दा उनलाई आवतजावतमा समस्या त भएको छ नै हप्तामा ३ पटक डायलासिस गराउँदै आएका अहिले सेन्टरले २ पटकमा घटाएको छ । त्यसमाथि ४ घण्टा गर्नुपर्ने डायलासिस २ घण्टामा झारिएको छ ।
बुधबार डायलासिस गराउने क्रममा कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘अस्ति ट्याक्सीमा आएको आज एम्बुलेन्समा आएँ । अब त हप्ताको २ पटक मात्र गर्ने र ? बाँच्न पनि गाह्रो हुने । सरकारले केही गर्नुपर्ने हो ।’
श्यामजस्ता सयौँ मिर्गौलाका बिरामीहरु अहिले निकै समस्यामा रहेका छन् । नेपाल मिर्गौलापिडित संघका अनुसार देशभर अहिलेसम्म ५ हजार ३०० जना मिर्गौलाका बिरामी रहेका छन् भने १८०० जनाको प्रत्यारोपण भएको छ ।
मिर्गौला पीडित सरोकार समाजका अध्यक्ष बलराम सुवेदीका अनुसार देशभर ५७ वटा डायलासिस सेन्टर रहेका छन् । उनलाई अहिले धेरै साथीहरुले कसैले डायलासिस पाउँदै नपाएको, पाएपनि समय हेरफेर गरिएको र आवतजावतमा समस्या थपिएको दुःखेसो पोख्ने गर्छन् ।
बलराम भन्छन्– ‘कतिपय डायलासिस सेन्टरले त सेवा नै रोकिसकेका रहेछन्, कसैले हप्ताको २ चोटी मात्र बनाएका छन्, कसैले समय नै घटाएका छन् । बिरामीलाई आउन पनि अप्ठेरो भइरहेको छ ।’
‘हप्तामा १२ घण्टा डायलासिस गर्नुपर्ने मान्छेलाई ६ घण्टाले मात्र पुग्छ ? आधा पेट खानाले पुग्छ ?’ बलराम आक्रोशित सुनिए । कोरोना भाइरसको जोखिम त्यसमाथि लकडाउनको समस्याले झन् समस्या थपिदिएको छ मिर्गौला पीडितहरुलाई ।
राष्ट्रिय मिर्गौला सेन्टरमा दैनिक १०० जनाको मिर्गौला डायलासिस हुन्छ । देशका विभिन्न ठाउँमा रहेको यसको शाखाबाट २५० जनाले डायलासिसको सुविधा लिने गरेका छन् । तर अहिलेको यो अवस्थामा अस्पतालका कर्मचारी, स्रोत साधनको व्यवस्थापनले पनि सेन्टरलाई असर गरिरहेको व्यवस्थापक बिमल बराल बताउँछन् ।
‘टाढाटाढाबाट आउने बिरामीहरुलाई आवतजावतको निकै समस्या भइरहेको छ,’ बिमल भन्छन्, ‘हामीले पहिलेभन्दा सिफ्ट घटाउन बाध्य पनि भएका छौँ । ४ घण्टामा गर्नुपर्ने डायलासिस ३ देखि २ घण्टामा झारेका छौँ । उनीहरुलाई केही फरक त पर्ला तर, अलिअलि भएपनि राहत हुन्छ भन्ने हो ।’
भक्तपुरको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा ढोका निरै सूचना टाँसिएको छ– ‘कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिने जोखिम र सरकारले लकडाउनको आदेश गरेकाले ३ चोटी डायलासिस गर्ने बिरामीहरुलाई २ पटक डायलासिस दिइनेछ ।’
यो सूचना पढेपछि बिरामीपनि निराश हुन्छन् । केन्द्रमा दैनिक १०० जनाको डायलासिस हुन्छ । केन्द्रका निर्देशक डा. पुकार श्रेष्ठका अनुसार उनीहरुलाई कोरोनाको अलि बढी जोखिम हुन्छ, भिडभाड हुन्छ बिरामीहरुको त्यसैले यस्तो सूचना गरिएको हो । ‘हाललाई डायलासिसमा प्रयोग हुने सामानहरु कमी नहोस् भन्ने नै हो,’ उनले भने ।
मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. अनिल बराल सरकारले यस्ता बिरामीका लागि केही योजना नै नबनाएकोमा दुखेसो पोख्छन् । ‘अरु रोगका बिरामीहरुलाई भाइबर, फोनबाट सेवा दिँदै आएका छौँ तर यस्ता बिरामीहरुलाई अझ झन् यो स्थितिमा गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले भने ।
मिर्गौलाको कार्यक्षमतामा कमी आएपछि मिर्गौलामा भएको विकार वस्तु मेसिनको सहायताले निकालेर सफा गर्ने पद्धतिलाई डायलासिस भनिन्छ । डायलासिस ज्यान बचाउने विधि हो । थुप्रै बिरामीहरु डायलासिसको भरमा बाँचिरहेका हुन्छन् ।
‘हप्तामा ३ चोटी अनि ४ घण्टा गराउनुपर्ने डायलासिसको विश्वव्यापी मान्यता हो । समय केही कम हुने बित्तिकै उनीहरुको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर परि नै हाल्छ,’ डा. बराल भन्छन् ।
डा. बरालका अनुसार छोटो समयमा डायलासिसले सफा गर्नुपर्ने शरीरमा रहेको विषाक्त पदार्थहरु पूर्ण रुपमा सफा हुन सक्दैन । डायलासिसमा शरीरबाट पानी पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ । पिसाव नहुने तथा अलिअलि खाएको झोल पदार्थहरुबाट शरीरमा पानी जम्ने हुन्छ । डायलासिसले जमेको पानी निकाल्नुपर्छ । त्यो पानी ४ घण्टामा निकाल्नुपर्नेमा २ घण्टामा निकाल्नु पर्दा शरीरलाई झन् गाह्रो हुन्छ ।
यसरी रुटिनमा हेरफेर हुँदा बिरामीको रक्तचाप कम हुने, हातखुट्टा बाउँडिने, साँस फेर्न गाह्रो हुने , बेहोससैसम्म हुने पनि हुनसक्छ । कालान्तरमा डायलासिसको मात्रा नपुग्ने हुनाले बिरामीको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
डायलासिसमा शुद्ध पानी अत्यधिक प्रयोग हुन्छ, औषधिहरु समयमा सप्लाइ भएन भने बन्द गनुपर्ने पनि हुनसक्ने डा. बराल बताउँछन् ।
सामान्य मान्छेलाई पनि कोरोनाको जोखिम बढेपछि डायलासिस चाहिन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । ‘मल्टी अर्गन फेलियर’ पनि हुनसक्छ । निमोनिया बिग्रेर शरीरका सबै अंगमा थेरापी दिनु पर्ने पनि हुनसक्ने चिकित्सकहरुको भनाइ छ ।
क्यान्सरका बिरामीलाई पनि उस्तै सास्ती
कान्ति अस्पतालका पेडियाट्रिक्स अंकोलोजिस्ट डा. विष्णुरथ गिरीका अनुसार ब्लड क्यान्सर भएका बालबालिकाहरुलाई एक डेढ महिनामा आएर इन्जेक्सन लाउनुपर्ने हुन्छ । ६ देखि ८ महिनाको मुख्य उपचार पछि विशेष सुई लाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो ३ वर्षसम्म लाउनुपर्ने हुन्छ ।
डा. गिरी भन्छन्, ‘बिरामीहरु धेरैजसो बाहिरका छन्, आउन समस्या छ । सबै ठाउँमा फेरि यो सुई लगाइँदैन ।’
उनले नयाँ जाँचमा समस्या हुनुका साथै औषधि र रगत पनि अभाव रहेको बताए ।
सिभिल अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सुवास पण्डित क्यान्सरका बिरामीहरुमा रोग प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुने भएकोले कोरोनाको जोखिम हुने बताउँछन् । जोखिम न्युनिकरण गर्न अहिले अस्पतालमा निको पार्ने खालको केमो नरोकेको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार केमो दुई खालको हुन्छ एउटा क्युरेटिभ (निको पार्ने) अनि अर्को प्यालिएटिभ (रोकथाम) गर्ने ।
अहिलेको अवस्थामा क्यान्सर फैलिसकेको छ र केमोको त्यति फाइदा छैन भने बिरामीसँग सल्लाह गरेर केमो रोक्ने र केमो गर्नुपर्ने समय पछि पनि धकेलेका उनी बताउँछन् । प्राय केमो ३ हप्तामा १ चोटी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. ऋषिकेश नारायण श्रेष्ठले लकडाउनले बिरामीलाई निकै समस्या भइरहेको बताउँछन् । ‘पासको समस्या छ । आवतजावतमा गाह्रो भएर बिरामी नै घटेका छन् । एकदमै कम बिरामी आएका छन्,’ उनले भने ।
हालको अवस्थामा नयाँ बिरामीलाई केमा नदिएको उनले बताए ।
प्रकाशित : चैत्र १३, २०७६ २०:१२